DENI iyo Xildhibaanada Puntland oo maanta dood adag ku yeelanaya Villa Garoowe – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
DENI iyo Xildhibaanada Puntland oo maanta dood adag ku yeelanaya Villa Garoowe
Siciid Cabdullaahi Deni, Madaxweynaha Puntland ayaa maanta kulan qado ah la qaadanaya Xildhibaanada Golaha Wakiillada Puntland, kaas oo ka qabsoomaya Madaxtooyada Garoowe.
Kulanka oo albaabadu u xiran yihiin, ayaa ah mid Xildhibaanada iyo Madaxweyne Deni uga wada-hadli doonaan marxalada ay Puntland mareyso, iyadoo Xildhibaanadu ay su’aal weydiin doonaan, lana doodi doonaan Madaxweynaha, sida uu sheegay Guddoomiyaha Baarlamaanka Puntland, Cabdirashiid Yuusuf Jibriil.
Kulanka ayaa imaanaya xilli Xildhibaanada Baarlamaanka ay Ajandaha rasmiga ah ee Kalfadhigga 50-aad ee Golaha ay ku dareen ka doodista “Khilaafka Madaxweynaha iyo Madaxweyne kuxigeenka Puntland” iyo la-xisaabtanka Xukuumadda.
wagar sansibaarka war waa haystaa war qiro guul daradaada inaad fashilantay kana shaqee sidii putland horey ugu Socon lahayd ama is casil oo xukunka wareeji waxba baarlaan gacan ku rimis ah ha ku meeraysan kkkk
SAMA-WADO DENI HA LAGAALA HADLO INUU MINYARO KAA DHIGTO ILEYN WAATAN AAD KU WAALATAYE.
ILEYN NIN RAGA KAMA HADLO NIN KALE QURUXDIISA IYO FOOLXUMIDIISEE.
SAMA-WADO GABAR DENI JECLAATAY.
Yaahuu deni ragganimo malaha, was calooshiisa u shaqeeste allaku qabay oo musiibooyin isdabajoogaa kugu habsadey yaa somali timir guranlaheeyeed ,baad tiihiin afka ugalesaye lagu afqabay nacas naac laha oo nin ismoodey , mar a haduu nin balaaranyahay oo macalweeyenyahay Kashmir ninmaahaa.doontii kula degtey ku dhimo.
Lul Ali, muxuu kaa cunay dani, miyaad ku riyootay, walaashay dani ma ogtahay dani gabar kale ayuu qabaa! Tii Labaad ma isu diyaarinaysaa kkkkk kaligaa ma ah kuwa badan oo ku waashay dani dani dani ayaa kaa horreeyey odayga sarwaalkiisa uga fuq ma xishooto ha noqonine, intaas ka badan kugu oran maayo ee xishood